ဘုရားရှိခိုးခြင်း ဟူသည် | International news for Myanmar Home
International news for Myanmar Home Features
ဘုရားရှိခိုးခြင်းသည် စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်သူအချို့ ရှိကြလေသည်။ အမှန်စင်စစ် ယင်းထက် အဓိပ္ပါယ်များစွာ ကျယ်ဝန်းသည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ရန် နည်းလမ်းမှာ - ရတနာသုံးပါးအပေါ် ယုံကြည်မှုထက်သန်သော
သဒ္ဒါ၊ စင်ကျယ်သော သီလ၊ တည်ငြိမ်သော သမာဓိ၊ မပြန့်လွင့်သော သတိ၊ သစ္စါလေးပါးနှင့် မြတ်တရားအကျိုး အကြောင်းတို့ကို သိမြင်သော ပညာ စသည့် ဗိုလ်
အင်္ဂါ ငါးပါး ကပ်၍ ရှိခိုးရမည်ဟု အဘိဓမ္မာကျမ်းတွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် အတိအလင်း ဟောကြားထားပါသည်။ အချိန်မှန်ကိုက် အဓိဌာန်ပြီး ဘုရားရှိခိုးခြင်း၊ ဂါထာရွတ်ခြင်း၊ မေတ္တာသုတ်
ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း အစရှိသဖြင့်တို့က သဒ္ဒါ၊ သတိ၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စသည်တို့
အမြဲစွဲကပ်၍ သာသနာ အဓွန့်ရှည်ရန်၊ ဘုရားဟော တရား မပျောက်ပျက်ရန် အကျိုးဆောင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ရာ
အမြဲပြုသော မဟာကုသိုလ်မျိုး ဖြစ်ရသည်။ သို့သော်လည်း ယခုခေတ်အခါ ယင်းသို့ အကျိုးသိမြင် ရှိခိုးခြင်းထက် အခြားရည်ရွယ်ချက်များ ဖြင့် ရှိခိုးနေကြသည်။ ဥပမာ- ကံ့ညံ့များ ပျောက်ရန်၊ ချမ်းသာရန်၊ အသက်ဘေးလွတ်မြောက်ရန်၊ စီးပွားဥစ္စာ တိုးပွားရန်၊ စာမေးပွဲအောင်ရန်၊ ရာထူးတိုးရန် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် ယင်းသို့ အကျိုးမျော်၍ ရှိခိုး ခြင်းသည် လောဘစိတ် အခြေခံခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကိလေသာပို၍ စွဲမြဲရသည်။ အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် ညံ့ဖျင်းသော ကုသိုလ် ဖြစ်ရသည်။ ထို့ပြင် ဘုရားရှိခိုးခြင်းဟူသည် ပြုခဲ့သော အပြစ်၊ အကုသိုလ်များ ပျောက်စေရန်လည်း မဟုတ်ပါ။ မည်သည့် ကံကိုမှ ဘုရားက ပြန်လည် ပြုပြင်စီရင်ပေး၍မရ။ ဘုရားရှိခိုးခြင်းက မိမိဟာ သဒ္ဒါ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သီလ စတာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေသေးပြီး ရတနာသုံးပါးကို အမြဲပူဇော်ဆည်းကပ်တယ်ဆိုတာကို
ပြန်လည် အမှတ်ရ သတိကပ်စေခြင်း၊ သာသနာ မကွယ်ပျောက်စေရန် ဘုရားဟော ဂါထာများကို ပြန်လည် ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ နတ်လူ အပေါင်း အမျှဝေသည်က မေတ္တာ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ယူခြင်း၊ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့်ဘုရားရှိခိုးခြင်း၏ အကြောင်းတရား များက အင်မတန် ပေါများလှပါတယ်။ အကြောင်းတရားများသလောက် အကျိုးတရား အဖြင့် မဟာကုသိုလ်ထူးများ ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှိခိုးခြင်းဟူသည် စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်သည် ဆိုသော သေးသိမ်သည့်အတွေးကို ပျောက်ပျက်စေပြီး ဘုရားဟောတရား အတိုင်း ကြောင်းကျိုးသိမြင် ရှိခိုးပူဇော်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားဟောတရား၊
သုတ်၊ ဂါထာ၊ ကျမ်းများကို မကွယ်ပျောက်စေခြင်းငှာ အဓိပ္ပါယ်လေ့လာသိရှိပြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းက သာသနာကို တည်တံ့စေသကဲ့သို့ မဂ်ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန် ရောက် အကျိုးထူးလှပါသည်။ အမှန်ကိုသိ ဥာဏ်မျက်စိဖြင့် လေ့လာသိမြင် ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေသော်။ --- အောင်ခမ်း (International news for myanmar) Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Aung Heine Oo
မင်းသမီး Nicole Kidman ၏ V မဂ္ဂင်း ကာဗာ အလှဓာတ်ပုံ...
သာမန်ထက် အသက်ပိုရှည်သော တိရစ္ဆာန်များ
ကမ္ဘာတစ်လွှား Celebrity အသုံးအဆောင်- ပေါက်ပေါက်ရှာရှ...
၂၀၁၂ ကမ္ဘာ့မသန်စွမ်း လန်ဒန် အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအန...
အစီးရေနည်း Maybach 57 and 62
ပြောင်းလဲလာသော အနောက်တိုင်းမှ ရေကူးဝတ်ဆုံ ယဉ်ကျေးမ...
ကမ္ဘာ့မသန်မစွမ်း အိုလံပစ် မီးရှုး အာကစားရုံသုိ့ ရော...
မိခင်တို့ ခွဲစိတ်ခန်းမဝင်ပဲ သမာရိုးကျ မွေးဖွားရာဝယ...
စပိန်တွင် တော်မီးလောင်၊ လူဦးရေ ၂၀၀၀ ကျော် နေရာရွေ...
သေချာ ချက်ပြုတ်မစားသောက်လျှင် အဆိပ်ပါနိုင်သည့် သီး...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှုမော်ဖွယ်နေရာအချို့ 
လည်ချောင်းနာပျောက်စေသော အစားအသောက်အချို့ 
အရောင်အလိုက် အစားအစာတို့၏ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုပ...
အီရန်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး နင်ဂျာတပ်ဖွဲ့
ရုရှားတို့ရဲ့  ခံတပ်ပျံကြီး K-7
ညအိပ်မပျော်သူများအတွက် အိပ်ပျော်စေသော အစားအသောက်မျ...
ဟောလိဝုဒ်အချစ်ရုပ်ရှင်များမှ အကောင်းဆုံးမင်းသမီး ၁...
နော်ဝေမှ လူသတ်သမားကို ထောင်ဒဏ် ၂၁နှစ်ချမှတ်
အံ့မခန်း 3D ပန်းချီများ
မြောက်အမေရိကမှ အမြင့်ဆုံး တောင်
ဟင်းချက်စက်ရုပ် ရှန်ဟိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွင် အသုံး...
မြန်မာပြည်ရောက် Range Rover Evoque
ဝမ်းတွင် အစာမရှိလျှင် အခါးရည် (လက်လက်ရည်ကြမ်း) သော...
ရှန်ဒေါင်း မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲ ကျင်းပ
ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ ရေနံတူးစင်သို့ သွားရောက် လည်ပတ်
မနက်အိပ်ယာထထခြင်း နွားနို့မသောက်ပါနှင့် (အစာမရှိလှ...
ဝမ်းထဲအစာမရှိသေးလျှင် မသုံးဆောင်သင့်သည့် အစားအသောက...
ရုရှား၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က တင့်ကားများ ဥရာပတွင် အသုံးပြ...
Facebook နဲ့ သတိပြုရန် Log In ပြဿနာ
အသစ်တွေ့ရှိသော ကုန်းတစ်ပိုင်း ရေတစ်ပိုင်း သတ္တဝါ မျ...
ဟောလိဝုဒ်မှ အလှဆုံဝတ်ဆင်နိုင်သော အမျိုးသမီး အနုပညာ...
အနှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပြီဖြစ်သော ရုရှားရေတပ် ကယ်ဆယ်ရေး သေ...
ဒေါ်လာ ၄၈သန်းခွဲတန် Koenigsegg CCXR
WikiLeaks တည်ထောင်သူကို အီကွေဒေါသံရုံးက ကာကွယ်ပေးထ...
ဆွီဒိန်နိုင်ငံ၏ အသန်စွမ်းဆုံး အမျိုးသမီး
တရုတ် ကျင်ဆူးနိုင်ငံတကာ မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲ
ပန်းချီကားတစ်ချက် ၁၅၀ တန်သော မြည်းပန်းချီဆရာ
Vogue မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးမှ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်အ...
ဒူဘိုင်းတွင် တည်ဆောက်မည့် ရေအောက်ဟိုတယ်
WikiLeads ပိုင်ရှင်အား ဆွီဒိန်သို့လွဲပြောင်ရန်အား ...
Celebrity နှင့် သူတို့ခွေးများ
ရုရှားစစ်သင်တန်းကျောင်းမှ တင့်ကားမောင်း လေ့ကျင့်မှ...
အရှေ့တောင်အာရှမှ အကောင်းဆုံး ကမ်းခြေ ၁၀ခု
ဘယ်လ်ဂျီယံမှ ပန်းပွင့် ၆ သိန်းကျော်နဲ့ခင်းတဲ့ ကော်...
အဖေများနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း
တက္ကဆက်တွင် ငါးများ ထောင်ချီသောင်တင်သေဆုံး
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် အမြွာပူး ညီအမ၏ ဘဝ
ဂရေဟမ်ဘဲလ် မိသားစုနဲ့ ဖုန်းပြောခွင့် မရသည့် အကြောင...
ခွေးအတွက် သွားဆရာဝန် မျောက်ငယ်လေး
လန်ဒန်အိုလံပစ်အပိတ်ပွဲတွင် Spice Girls တို့ဖျော်ြေ...
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးကား နှင့် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆံ...
ကမ္ဘာတစ်လွှား ၂၂ နေရာတွင် ၂၂ ခါမင်္ဂလာဆောင်ကြသူ
ကိုကာကိုလာ ကုမ္ပဏီ စီအီးအို၏ ၃၀ စက္ကန့်သာကြာသော မိန်...
အမေရိကန်ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပြီ ဖြစ်သော စစ်တပ်သုံး လေသ...
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး တရိစ္ဆာန်သရုပ်ဆောင် မျောက်မလေး
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အနီရောင်သန်းနေသော ရေကန်
ကားအက်ဆီးဒန့် သို့မဟုတ် လင်ဆေးလိုဟန် (အင်္ဂလိပ်စာအသံ...
အာတိတ်ရေခဲပြင်တွင် နေထိုက်ကျက်စားသော တိရစ္ဆာန် ၁၂ မ...
မီတာ ၂၀၀ တွင် ဂျာမီကာမှ အူစိန်ဘော့မှ ရွှေဆွတ်ခူး
ဒိန်းမတ် Copenhagen Fashion Week
စပယ်ကြီးမြွေနှင့် မိကျောင်းတို့ တိုက်ပွဲ
HIV ကာကွယ်ဆေးအား အသုံးပြုရန် အတည်ပြုလိုက်
9 gorgeous celebrities grace Fashion Weekly magazi...
အိန္ဒိယမှထုတ်သော ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး တင့်ကား
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စိန်ကိုယ်ထည် လက်စွပ်
မြန်မာပြည်မှ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး မြင်းခုံတံတား (ဂုတ်ထိ...
International News For Myanmar. Powered by Blogger.
Copyright © 2012 International news for Myanmar and Blogger Templates. Blogger Template by Clairvo